Ndeupi ruzivo ratinounganidza?
Tinounganidza mashoko kubva kwauri apo iwe unyoresa panzvimbo yedu yepaiti, isa urongwa, tumira kune tsamba yedu, uzadze fomu kana kuisa zvinhu mumotokari yako yekutenga.
Kana iwe uchiraira kana kunyoresa panzvimbo yedu yepaiti, sezvakakodzera, unogona kubvunzwa kuisa yako: zita, e-mail kero, email address kana nhamba yefoni. Iwe unogona, zvisinei, unoshanyira nzvimbo yedu isina kuzivikanwa.
Google, sevatengesi vechitatu, inoshandisa makiki kuitira kushambadzira panzvimbo yako. Kushandiswa kweGoogle yeDART cookie kunoita kuti itange kushambadzira kune vashandi vako maererano nekushanyira kwavo kune dzimwe nzvimbo uye paIndaneti. Vashandi vanogona kusarudza kushandiswa kweDOC cookie nekushanyira mvumo yeGoogle uye yehutano hwehutano hwehutano.
Chii chatinoshandisa mashoko ako?
Zvose zvemashoko atinowana kubva kwamuri zvinogona kushandiswa mune imwe yenzira dzinotevera:
Kuti uite zvaunofunga nazvo - (ruzivo rwako runotibatsira kuti tiite zviri nani pane zvaunoda)
Kuvandudza website yedu - tinoramba tichiedza kuvandudza marashiro edu webhusaiti zvichienderana nehuwandu nemhinduro yatinowana kubva kwamuri
Kuvandudza kushandiswa kwevatengi - ruzivo rwako runotibatsira kuti tibvunze zvakanakisisa kune zvikumbiro zvebasa rako uye zvinotsigirwa zvinodiwa
Kuita zvekutengesa - Nhoroondo yako, ingava yevoruzhinji kana yega, haingatengeswi, kuchinjwa, kuendeswa, kana kupiwa kune imwe kambani chero zvikonzero chero chipi zvacho, pasina kubvumirwa kwako, kunze kwechinangwa chaicho chekuendesa chigadzirwa chakatengwa kana basa rawakakumbira.
Kuti tishandise zvatinopa - kukwikwidzana, kukurudzirwa, kuongorora kana imwe nzvimbo nzvimbo
Kutumira ma-mail nguva nenguva - Kero kero ye-email yaunopa kuti urongwa hwekugadzirisa, hunogona kushandiswa kukutumira iwe ruzivo nekuvandudzwa maererano nehutungamiri hwako, kunze kwekugamuchira dzimwe nguva nhau dzekambani, zvigadziriswa, zvakagadzirwa nemhizha kana ruzivo rwebasa, nezvimwewo.
Cherechedza: Kana panguva ipi zvayo ungada kuzvidzivirira kubva kune maimeri emajeri, tinosanganisira zvakadzama kusazvinyora mirayiridzo iri pasi pemutumwa imwe neimwe.
Isu tinoshandisa zvakasiyana-siyana zvekuchengetedza matanho ekuchengetedza kuchengetedzwa kwemashoko ako ega kana iwe ukaisa urongwa kana kupinda, kuisa, kana kuwana mazwi ako ega.
Tinopa kushandiswa kwesevha yakachengeteka. Zvose zvinopa ruzivo rwemashoko / chikwereti zvinoparidzirwa kuburikidza neTechnology Secure Socket Layer (SSL) tekombiyuta ndokubva dzavharwa muNhepfenyuro Yedu yeHedheni yevashandi vese kuti iwanikwe nevaya vane kodzero yekuwana yakakwana yemitambo yakadaro, uye vanofanira kuchengetedza ruzivo rwekuvanzika.
Mushure mokutengeserana, ruzivo rwako rwepachivande (makadhi emakwereti, nhamba dzekuchengetedzwa kwevanhu, mari, nezvimwewo) haigoni kuchengetwa pamashandi edu.
Tinoshandisa makiki here?
Hungu, Cookie mafaira maduku ekuti nzvimbo kana kuti mutsigiri wako anotumira kune makombiyuta makambani akaoma kuburikidza neWeb browser yako (kana iwe uchibvumira) izvo zvinoita kuti masayiti kana masangano ekupa vashandi vabvume browser yako uye kubata nekuyeuka mamwe mashoko.
Tinoshandisa makiki kutibatsira kuti tirangarire uye tishandise zvinhu zviri mumotokari yako yekutengesa, kunzwisisa uye kuchengetedza zvido zvako zvekushanyira mune ramangwana uye kuunganidza deta yakawanda pamusoro pepaiti yepaiti uye nzvimbo yekubatana kuitira kuti tikwanise kupa zviitiko zvema site uye zviri nani mune ramangwana.
Kana uchida, iwe unogona kusarudza kuti kombiyuta yako ikuyambise nguva dzose kana cookie iri kutumirwa, kana iwe unogona kusarudza kuvhara ma cookies kuburikidza nemagadzirirwo ako. Kufanana nemamwe mawebhusayithi, kana iwe ukabvisa ma cookies yako, mamwe emashandiro edu angasaita zvakanaka. Zvisinei, iwe unogonazve kuisa mirairo kuburikidza nekutaura nevatengi vebasa.
Tinozivisa chero ruzivo kune mamwe kunze kwemapato here?
Isu hatitengesi, kutengesa, kana kutumira kune dzimwe nyika mapepa ako ega anozivikanwa. Izvi hazvirevi vatatu vanovimba navo vanotibatsira pakushanda webhusaiti yedu, kuita bhizimisi redu, kana kushumira iwe, chero bedzi mapato aya anobvumirana kuchengetedza ruzivo urwu zvakavanzika. Tinogonawo kusunungura ruzivo rwako kana tikatenda kusunungurwa kwakakodzera kuti titevedze mutemo, tishandise mapurogiramu edu epaiti, kana kuti tidzivirire isu kana dzimwe kodzero, pfuma, kana kuchengeteka. Zvisinei, ruzivo rwusingazivikanwi rwekushanyira vatorwa rungapiwa kune mamwe mapato ekutengeserana, kushambadzira, kana zvimwe zvinoshandiswa.
Dzimwe nguva, pamusana pekuziva kwedu, tinogona kusanganisira kana kupa zvikwereti zvechitatu kana mabasa pane webhusaiti yedu. Aya mapato evechitatu ane mazano akazvimirira uye akazvimirira. Saka isu hatina mhaka kana mutoro wezvakagadzirwa uye mabasa emamwe masayiti akabatanidzwa. Kunyange zvakadaro, tinotsvaka kuchengetedza kutendeseka kwenzvimbo yedu uye kugamuchira chero upi nehupi pamusoro pemasayiti.
California Online Privacy Protection Act Kuteerera
Nokuti tinokoshesa mararamiro enyu atora matanho anodiwa kuti tive maererano neCalifornia Online Privacy Protection Act. Saka isu hatizoparadzi ruzivo rwenyu rwemunhu kune dzimwe nyika kunze kwekubvuma kwako.
Sezvimwe chikamu cheCalifornia Online Privacy Protection Act, vese vashandisi vepaiti yedu vanogona kuita chero shanduko kumashoko avo panguva ipi neipi nekupinda muchengeti yavo yekugadzirisa uye kuenda kune peji 'Rega Profile'.
Vana Vana paIndaneti Kuchengetedzwa Kwekuchengetedzwa Kwekuteerera
Tiri kurarama maererano nezvinodiwa neCOPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), hatinounganisi chero ruzivo kubva kuna ani zvake ari pasi pemakore e13. Nzvimbo yedu webhusaiti, zvigadzirwa nemishandiro zvose zvinotungamirirwa kuvanhu vane makore anopfuura 13 kana kupfuura.
Iyi nhungamiro yehutachiona iri paIndaneti inoshanda chete kune ruzivo rwakakonzerwa kuburikidza newebsite yedu uye kwete ruzivo rwakakangan
Ndapota shanyai nemitemo nemigariro yedu chikamu chekugadzira kushandiswa, zvinyorwa, uye kukwana kwemhosva inotungamirira kushandiswa kwewebsite yedu pa http://www.carlhenryglobal.com/terms-and-conditions
Nokushandisa shanduro yedu, unobvumirana nemitemo yedu yega.
Kuchinja kweChinyorwa Chedu Chedu
Kana tikasarudza kuchinja marongerwo emitemo yedu, tichaisa zvigadziriswa pa peji ino, uye / kana kuti kuvandudza Dhigiriro reKubvumira Mutemo pasi pezasi.
Iri mutemo rakagadziridzwa kugadziriswa pa 25 / 03 / 2018
Kana pane mimwe mibvunzo pamusoro peiyo purogiramu yevhangeri iwe unogona kutitumira isu uchishandisa mashoko ari pasi apa.